Senator Nadiir oo ugu baaqay dowladda iyo maamulka Jubbaland in ay ka wadda-shaqeeyaan sidii loogu gurman lahaa dadka ay saameysay abaarta ee ku nool Gedo – Kalfadhi
Senator Nadiir oo shir jaraa’iid shalay ku qabtay xarunta Aqalka Sare ee Baarlamaanka, ayaa ugu baaqay dadka Soomaaliyeed ee wax heysta in ay u gurmadaan dadka ay saameyneyso abaarta ee ku nool gobolka Gedo, isaga oo dhinaca kale ugu baaqay dowladda dhexe iyo maamulka Jubbaland in ay ka wadda-shaqeeyaan gurmad loo sameeyo dadka.
Senator-ka oo ka tirsan guddiga arrimaha bulshada isla markaanna laga soo doortay Jubbaland, ayaa xaaladda ka jirta gobolka ku sifeeyay mid aad u daran oo u baahan in deg-deg wax looga qabto.
Guddiga gurmadka abaaraha ee xukuumadda Soomaaliya u xil saartay ka jawaabista xaaladaha abaaraha ayaa isla shalay sheegay in ay heleen jawaabo wax ku ool ah oo ku aadan wax u qabashada dadka ay saameeyeen abaarahaasi.
Abaarta ka jirta goblka Gedo ayaa saameysay dhammaan todobada degmo ee uu ka koobanyahay gobolka Gedo ee koonfurta Soomaaliya. Xaaladda abaarta ee gobolka ayaa salka ku heysa biyo iyo baad la’aan.
Dhegeysiga dacwadda badda ayaa maanta ka billowday Maxkamadda ICJ